အချို စားလို့ ဆီးချိုဖြစ်တာလား ........... - Hello Sayarwon
အချို စားလို့ ဆီးချိုဖြစ်တာလား ...........
ဆီးချိုလို့ ပြောလိုက်ရင် လူတော်တော်များများက အချို စားလို့လို့ ထင်တတ်ကြပေမယ့် တကယ်ကတော့ ဆီးချိုဆိုတာ အချိုစားတာ တစ်ခုတည်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို စားတာများတာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို မြင့်တက်စေပြီး ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြား အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
ဆီးချိုကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို၊ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဆိုပြီး ခွဲခြားထားပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ အဖြစ်များတဲ့ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုက အချိုစားလို့ ဖြစ်တာလား ဘာတွေကများ ဖြစ်စေနိုင်တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်က ဆီးချို ဖြစ်မှာ ကြောက်တယ်ဆိုပေမယ့် သတိမထားမိဘဲ ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အလေ့အထတွေကို လုပ်မိနေလားဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ရင်း ဆန်းစစ်ကြည်ရအောင်လား …….
အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဆိုတာ
အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို ခံစားရတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေထဲ သကြားဓာတ်ရောက်ရှိစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ အင်ဆူလင်ကို မတုံ့ပြန်တာကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ပုံမှန်အခြေအနေမှာ ထိန်းနိုင်စေဖို့အတွက် အင်ဆူလင်ကို လုံလောက်အောင် မထုတ်ပေးတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုကို အရွယ်ရောက်မှ ဖြစ်တဲ့ ဆီးချို လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ကလးအရွယ်ကတည်းက အဝလွန်တာ၊ နေထိုင်မှုပုံစံက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေကြောင့် သတ်လတ်ပိုင်းမတိုင်ခင်မှာတင် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုကို ခံစားရတာတွေရှိနေပါတယ်။
အချို စားလို့ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဖြစ်တာလား
ဒီလို ဖြစ်ရတာက အချို စားတာ များလို့ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို အစားများတာက ဆီးချိုကို တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အချိုစားများတာက ဆဲလ်တွေကို ရောင်ရမ်းစေတာ၊ အဝလွန်စေတာတွေ ဖြစ်စေပြီး ဒီကနေမှ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေတာပါ၊ ဒါ့ပြင် ဒီအချက်တွေကြောင့်လည်း အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျိုးဗီဇ။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် မျိုးရိုးလိုက်တာပေါ့။ ဥပမာ မိဘတွေ ဘိုးဘွားတွေမှာ ဆီးချိုဖြစ်ဖူးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇ (DNA) က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အင်ဆူလင် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်မှာ သက်ရောက်နေလို့ပါ။
ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် များနေတာ၊ အဝလွန်နေတာတွေကလည်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပြီး ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ပုံမှန် မဟုတ်တာ။ ခန္ဓာကိုယ်က စားသုံးလိုက်တဲ့ အချိုဓာတ် နဲ့ အခြားသော အာဟာရဓာတ်တွေကို စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေကလည်း ဆီးချိုရောဂါခံစားရစေနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။
အသည်းက ဂလူးကို့စ်တွေကို လိုတာထက် ပိုထုတ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့်လည်း ဆီးချိုရောဂါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဆဲလ်တွေကြားက ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်မှုတွေ မကောင်းတာကြောင့်လည်း ဆီးချို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အင်ဆူလင်ထုတ်တဲ့ ဘီတာဆဲလ်တွေ ပျက်စီးတာကြောင့်လည်း ဆီးချို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရတာကလည်း ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းတာ၊ အထိုင်များတဲ့ အလုပ်ခွင် အနေအထားတွေကလည်း ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကလည်း ဆီးချို ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်မှာ သက်ရောက်နေတဲ့ အချက် တစ်ခုပါပဲ။
စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ မှားယွင်းနေတာကလည်း ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။
ကဲ …. အချို စားလို့ ဆီးချိုဖြစ်တာလား ဆိုပြီး ဆီးချို ဖြစ်မှာစိုးတယ်ဆိုပြီး အချိုတော့ လျှော့စားပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အခုပြောခဲ့တဲ့ အလေ့အထတွေကိုတော့ လုပ်မိနေတယ်ဆိုရင် အခုကစပြီး ပြုပြင်လို့ရတာတွေကို ပြုပြင်လို့ ဆီးချိုကို ကာကွယ်လိုက်ပါ။
Type2diabetes https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-2-diabetes/symptoms-causes/syc-20351193 Accessed Date3November 2021
type2diabetes https://www.diabetes.org.uk/type-2-diabetes Accessed Date3November 2021
ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဟင်းချက်ဆီ ရွေးချယ်မယ်။